Wasiirka Amniga Puntland oo dib ugu soo laabtay magaalada Boosaaso | Puntland Today
Wasiirka Amniga Puntland oo dib ugu soo laabtay magaalada Boosaaso
Posted on February 15, 2017 by Dal Joog	Boosaaso-(P-TODAY)-Wasiirka Amniga Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab ayaa dib ugu soo labtay Magaalada Boosaso ee xarunta gobalka Bari, ka dib mudo 5 bilood ah oo uu hawlo caafimaad ugu maqnaa dalka Hindiya.
Wasiirka Amniga Puntland ayaa ka hadlay Xaladiisa caafimaado waxan uu sheegay in xiligan aya ay tahay mid aad u wanagsan.
Falalkii dilka ahaa ee loo gaysto Masuuliyiin ka tirsan Puntland ee ka dhacay magaalada Boosaso ayuu ka hadlay waxan uu sheegaya in talaabooyin ay qadeen lamaha Amanku islamrkaana wixii ka dhiman uu qaban doono madaama uu dalka dib ugu soo labtay.
Shacabka Reer Puntland ayuu ugu Baaqay in ay meel uga soo wada jeestan wixii Amanka khal khal ku wada lamaha Amankana ay la socod siiyan.
Halkaan ka dhegayso codka Qarjab